トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ukuqala kwenyanga - ukuqala sasemakhazeni pachinko kwesici (inkathi yokutakula noma evulekile-ukuphila)
※ Uma ubulokhu nje ejwayele ukuhamba njengendlela mkhuba yonke umkhakha ukujabulisa
pachinko emakhazeni e yereferensi, kodwa angithandi kungenzeka uye waphawula, e wamakhaza pachinko, kanye nesikhathi kanye umdlalo olula, kuzoba nalapho akusiyo . Lapho ekhuluma lapho ukuthi kungakhathaliseki isikhathi umdlalo, ukuze wazi, baphume kuyadingeka ukuhlola izinhlelo zebhizinisi wamakhaza pachinko.
futhi wezwa kunoma iyiphi umkhakha, kukhona into ebizwa nangokuthi business plan e sasemakhazeni pachinko, futhi kuphi wamakhaza pachinko, sisuke ezisebenza ngesisekelo leli cebo ibhizinisi. Kungakanani inzalo enkulu, futhi yokusebenza uhlelo lapho futhi kanjani yokutakula, ungabona eziningi pachinko emakhazeni ukuthi bame ngenyanga yokuqala. Kuyinto kwebhizinisi plan ye inyanga eyodwa kuze kube sekupheleni ngenyanga kusukela ngenyanga yokuqala.
ukuze kuzuzwe ngangokunokwenzeka leli cebo ibhizinisi, thina isikhathi isikhathi futhi iqoqo izenzakalo, uya cishe isinqumo. Yiqiniso, ngoba icebo, kungenzeka ingasebenzi. Kunalokho, ngokoqobo ezinjalo kuphela lokho kungasebenzi kuyinto wamakhaza pachinko. Ngo
, ekuqaleni kwenyanga ka pachinko emakhazeni is, onjani yebhizinisi ukuya, ngifuna ukubona. Ukuqala kwenyanga of pachinko eshintsha, it has a ibhizinisi Akumangalisi baqaphe. Kusukela ekuqaleni kwenyanga, ngoba asikwazi ukukhipha kusilela. Nail ukulungiswa, izitolo ngokuvamile nail ukulungiswa ngesikhathi okuyisisekelo, cishe baphume ukuze ubone ithebula idatha ziyonenza kuwe kokuqina kancane.
slot Kungokufanayo, ezimweni eziningi, setha 1, kuthebula ukuzixazulula, unayo Uchinaoshi noma okunye okunjalo esimweni esifanayo. Ukuqala kwenyanga futhi isezingeni pachinko eshintsha, pachinko kokubili slot, ukuvimbela Desugi ezingalindelekile, kuba Awayokuba yesikhathi uzama ukonga business plan noma ngaphezulu inzalo enkulu.
Ngakho, liyoba avame ukuba yokuthengisa yekwentiwa.
Yiqiniso, lokho akusho ukuthi izoya njengoba umshini ngacabanga, kukhona icala ukuthi uyovela. Nokho, ngisho nalapho enjalo, kusekuningi ngaphandle noma qinisa izinzipho ophelele, kukhona futhi ngibone indlela nime. Ubude kanye Lapho mina, pachinko eshintsha mayelana nodaba igesi-laden ekuqaleni kwenyanga kungenzeka amancane. Kuphela, ukuvikela ijubane evamile yebhizinisi.
lapha, kukhona iphuzu ngifuna ukugxila.
ke, ekuqaleni kwenyanga ka pachinko emakhazeni Kuyaphawuleka ukuthi esimweni esejwayelekile zebhizinisi esitolo. Ngaphandle ngisho sizimisele ukubekezelela khona, kodwa enjalo iyindawo ezifana okungavelanga enhliziyweni ukuba aqinise yokutakula kuze khona. Wonke umuntu ezitolo bayahamba ukudlala evamile nail izinguquko nezilungiselelo isimo, kukhona isikhathi ebonakala ngokucacile ukuwa. Ukuqala nyanga, ungakwazi ngokuthi isikhathi kungcono, eye ukubonwa kakhulu ukuze ukwazi esitolo. Ngisho nasezimweni ezikhululekile kungenzeka
nail ukulungiswa, uma ebhekwa ngokusebenzisa ngenyanga eyodwa, ikakhulukazi ekuqaleni kwenyanga ka isimo, evulekile kuba, kwenza kube lula ukwahlulelwa kukhona some. Nokho, kusukela igesi-izitolo ngaphandle akuyona umehluko ngokwanele, kuwumphumela e utshalomali kakhulu, kusho ukuthi sekuyisikhathi ukuthi asikwazi Kunconywa. Ukuqala kwenyanga, ngaphandle komdlalo omkhulu, wena azinikele kangcono kuso ukuze bagcine eshintsha pachinko.
yebo, ngoba likhulu nkathi akuyona ngokumangalisayo yokutakula, uma lapha Khonza, ungase ngezinye izikhathi zama hit. Ukuze abambe ekuqaleni kwenyanga, esikhathini umdlalo kwenyanga eyodwa, zama ukuthola ngokuqinile. Sekuyisikhathi ukuthi akukwazi kufanelekile. Ukuqala kwenyanga, ngaphandle komdlalo omkhulu, wena azinikele kangcono kuso ukuze bagcine eshintsha pachinko.
yebo, ngoba likhulu nkathi akuyona ngokumangalisayo yokutakula, uma lapha Khonza, ungase ngezinye izikhathi zama hit. Ukuze abambe ekuqaleni kwenyanga, esikhathini umdlalo kwenyanga eyodwa, zama ukuthola ngokuqinile.